DEG-DEG: Man United Oo Saxeexeedii SADDEXAAD 48 Saac Gudahood Heshay, Da'yar Mucjiso Ah Oo Ay La Heshiiyeen & Booska Uu Ka Ciyaaro - Gool24.Net
DEG-DEG: Man United Oo Saxeexeedii SADDEXAAD 48 Saac Gudahood Heshay, Da’yar Mucjiso Ah Oo Ay La Heshiiyeen & Booska Uu Ka Ciyaaro
Kooxda Manchester United ayaa gacanta ku dhigtay saxeexeedii saddexaad mudo 48 saacadood gudaheed ah iyagoo qarka u saaran isla markaana dhammeeyay inta badan heshiiska da’yarka garab weerar ee kooxda Atalanta ee Amad Traore.
Manchester United ayaa suuqan ka doonaysay inay kala saxeexato xiddig garab ah gaar ahaan booska garabka midig iyagoo ugu horreynba doonayay Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ka tirsan.
Red Devils ayaa heshiiska Sancho awood u yeelan waayay maadaama oo ay iska diideen inay bixiyaan lacagta 108 Milyan ee Pound ah ee ay kooxda ree Germany ku xidhay inay iibiso.
Markale United ayaa u weecatay Ousmane Dembele oo booskaas ah kana tirsan kooxda Barcelona laakiin heshiiskaas ayaa sidoo kale u muuqda mid aan macquul ahayn maadaama ay United kaliya qaab amaah ah ku rabto.
Ousmane ayaa u sheegay Red Devils in qaabka kaliya ee uu ugu biiri karaa ay tahay inay heshiis rasmi ah oo mudo dheer ah ka saxeexdaan iyadoo sidoo kale ay Barcelona doonayso kaliya inay iibiso haddiiba uu ka baxayo.
Haddaba, taas bedelkeeda Man United ayaa hadda heshiis buuxa kooxda Atalanta kala gaadhay saxeexa Amad Traore oo 18 sano jir garabka weerarka ka ciyaara ah.
Heshiiska ayaa ah mid maanta la filayo inuu dhaco balse Man United ayuu Traore si rasmi ah ugu soo wareegi doonaa xagaaga sanadka dambe ee 2021, kooxda Premier League ayaa lacag 27 Milyan oo Pound ah kula heshiisay Atlanta.